SOMALIA Titanium Distributor & Stockist
SOMALIA - Titanium Distributor & Stockist
Waxaan nahay ganacsade keentay caalamka & stockist of Titanium , iyo hormoodyada keeno dhex Alloys titanium dukaanka online iyo qalabka qaaska ah la iska caabin ah daxalka , caabiga kulaylka , xoog sare iyo guryaha kale ee muhiimka ah . Our dukaanka online www.ti-shop.com qaado kala duwan ubalaadhan oo ah tirada iyo fasalada in Wire / Bar / Rod / Sheet / Plate / bireed / Tube / Dhuumaha .
Waxaan u adeega kala duwan ee macaamiisha in warshado kala duwan oo ay ku jiraan , Jaamacadaha , laboratories Research , Fabricators , Aerospace , implants Medical , Motorsport , wadanay , Geedaha processing Chemical , Oil & Gas , processing Cuntada .
Our qaaska ah waa in iibinta tiro yar . Waxaan sidoo kale waxay bixiyaan tiro weyn ee qiimaha jiidasho leh waqtiga dhalmada gaaban .